Shwe Myanmar House | Mini Condo ရှိတိုက်ခန်းများရောင်းရန်ရှိသည်
Mini Condo ရှိတိုက်ခန်းများရောင်းရန်ရှိသည်
ကြေငြာတင်ခဲ့သည့်နေ့ 13 Jul 2019
0.00 USD per ft
17' x 73' ft
အဆင့်မြင့် အိပ်ခန်း 1
ရိုးရိုး အိပ်ခန်း 1
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဒီဇိုင်းများနှင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီး စနစ်ကျသောအခန်းဖွဲ့စည်းမှု၊ ကားပါကင် နှင့်လုံခြုံမှုအပြည့်အဝရှိသော အိမ်ယာဖွဲ့စည်းပုံအစရှိသည့် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ လှပသေသပ်ခန့်ညားဆုံးဖြစ် အောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ၍ ဆောက်လုပ်ထားသော အဆင့်မြင့်အဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်ခမျာ.....
အခန်းအကျယ် -- 17' x 73'
Master Bed Room -- 1
Bed Room --1
Living Area, Kitchen Room, Common Bath & W/C, Dining Area, Shrine Area, Verandah Area များပါရှိပြီး အတွင်းနံရံများကို အကောင်းစား Plastic Paint သုတ်ပေးထားပါမည်။ အပြင်နံရံများကိုလည်း ရာသီဥတုဒဏ်ခံ Weather Shield Plastic Paint အကောင်းစားတာရှည်ခံဆေးများ သုတ်ပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆောက်အဦတွင်ကိုယ်ပိုင် Transformer တပ်ဆင်ထားပြီးအခန်းတစ်ခန်းလျှင် ကိုယ်ပိုင်မီတာ(၁)လုံးစီ၊မီးပိုက် များအားလုံးကို မျက်နှာကျက်နှင့်နံရံများတွင်မြှုပ်နှံ၍ ထည့်သွင်းပေးထားမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်မော်တာ(၁)လုံးစီ၊ Overhead Tank (၁)လုံးစီနှင့် Auto ရေတင်စနစ်ပါဝင်ပြီး Under Ground Tank ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ပေးပါမည်။
Elevator, Car Parking ပါဝင်တာမို့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Mini Condo ပါနော်..
အဆင့်မြင့်အဆောက်အဦးတွင်နေထိုင်မည့် မိသားစုများလုံခြုံစိတ်ချစွာနှင့် ပြီးပြည့်စုံစွာ နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်
- Aircon (2)Nos - Fire Extinguishing System.
- Smoke Exhaust In Kitchen - Water Heater System များပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Contact Us 🗒
Ph : 01-203466, 09-796688880, 09-796688881
Email : threefriendsgroup2000@gmail.com
Address : No.(44/A2), Maharzayya Street, Kyi Taw
Wards, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
ယေဘုယျ ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ
လိပ်စာ Mya Yar Gone Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
မြို့နယ် / မြို့ Mingala Taungnyunt
ပြည်နယ် / တိုင်း ရန်ကုန်
Aung Min Thein
Golden Myanmar Company
Rating နဲ့ Comment ပေးရန်အတွက် အကောင့်ဝင်ပါ
ကြေငြာတင်ခဲ့သည့်နေ့: Sat, Feb 23, 2019
Name: Email: အီးမေးလ် အကြောင်းအရာ: မက်ဆေ့:
No.(44/A2), Kyitaw Housing,
Mahazaya Street, Kyitaw Wards,
01-203758, 01-203466, 09-796688880,
Shwe Myanmar House 2017-2019, All Rights Reserved | Powered by IGS
အသုံးပြုသူ မှတ်ပုံတင်ရန် -- Or -- အကျိုးဆောင်များ မှတ်ပုံတင်ရန်